Semalt: Sc तरीकाहरू वेब स्क्र्यापिंगको साथ तपाईंको एसईओ विश्लेषण सुपरचार्ज गर्न
इन्टर्नेट SEO मा सल्लाहले भरिएको छ। वेब स्क्र्याप ई ing्गका साथ सम्भव छ कि हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरू उल्ट्याउन सम्भव छ रणनीतिको योजना बनाउन उनीहरूलाई सताउन। चाहे तपाइँ शीर्षक ट्याग, मेटा विवरण वा कीवर्ड स्क्र्याप गर्नुपर्नेछ, तपाइँ तपाइँको काम पूरा गर्न सही सामग्री स्क्रेपर प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
वेब स्क्र्यापिंगको साथ तपाईको एसईओ विश्लेषण सुपरचार्ज गर्न यहाँ5बिभिन्न तरिकाहरू छन्।
१. प्रतियोगीको कीवर्ड विश्लेषण:
तपाइँ सजिलैसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धीको वेबसाइट खोप्न सक्नुहुन्छ र किवर्ड विश्लेषणको लागि यसको सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस उद्देश्यका लागि, तपाईं SEMRush प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरू खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। SEMRush एक व्यापक डेटा स्क्र्यापिंग उपकरण हो। यसको साथ, तपाइँ कुन प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी प्रयोग गर्दै छन् निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईले उहाँको लामो पुच्छर र छोटो पूंछ कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको साइटलाई राम्रो तरिकाले क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
२. पृष्ठहरूको प्रदर्शन:
बिभिन्न SEO उपकरणहरू र सेवाहरूले डोमेनका लागि ध्यान दिन्छन् र उत्तम श्रेणीहरूको लागि कुञ्जी शब्दहरू राख्छन्। तपाईंको वेब पृष्ठहरूको समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न डाटा स्क्र्याप गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। के तपाइँ तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगमा अधिक यातायात ड्राइभ गर्न चाहानुहुन्छ? गुगल ऐडवर्ड्स एपीआई एक उत्कृष्ट उपकरण हो जसले डाटालाई स्क्र्याप गर्दछ र तपाइँको वेब पृष्ठहरू सजिलै क्रोल गर्दछ। साथै, यसले तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र यसको स्तरलाई बढावा दिन्छ।
Met. मेटा डाटा निकासी:
किमोनो ल्याबहरू र Import.io दुई उत्कृष्ट वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू हुन् । तिनीहरू मेटा-डाटा निकाल्न र सजीलै हाम्रो वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिका गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ यो पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि किन तपाइँको प्रतिस्पर्धीको साइट तपाइँ भन्दा राम्रो र ranking्कि। छ, तपाइँ यी उपकरणहरु मध्ये कुनै पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको साइटका लागि उपयुक्त कुञ्जीशब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। Import.io र Kimono को साथ, तपाईं सजिलैसँग मेटा वर्णन, मेटा शीर्षक, र मेटा ट्यागहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
Page. पृष्ठ श्रेणीका लागि वेबसाइटहरू स्क्र्याप गर्नुहोस्:
एसईओ को लक्ष्य दिएका कुञ्जी शव्दहरूको लागि पृष्ठ श्रेणी बढाउनु हो। सबै वेबमास्टरहरूलाई एक SEO वेब स्क्रेपर चाहिन्छ जसले उनीहरूको साइटहरूको समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। एक पटक डाटा पूर्ण स्क्रयाप भयो, तपाईं यसलाई आफ्नै ब्लगमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा गुणस्तर ट्राफिक ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं स्क्रिपी कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, डाटा निकासी उपकरण जसले तपाईंको मुख्य कुञ्जी शब्दहरू परिवर्तन नगरी विभिन्न वेबसाइटहरूबाट जानकारी स्क्र्याप गर्दछ। रैंक बढाउने एक तरीका भनेको तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले के गरिरहेछन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूको वेबसाइटहरू नक्कल गर्नुहोस्।
Intern. आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू:
यो भन्न सुरक्षित छ कि वेब स्क्र्यापि and र एसईओको घनिष्ट सम्बन्ध छ। राम्रो खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको लागि तपाईलाई सँधै आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू चाहिन्छ। गेटलफ्ट, पार्सेब र आउटविट हबको साथ तपाईं आफ्नो वेब पृष्ठहरू मात्र क्रल र एक्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्न तर बलियो आन्तरिक लिंकहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरूको साथ, तपाईं सजिलैसँग निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको प्रतियोगीको साइटले कति कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। तपाईंको सामग्रीमा कुञ्जी शब्दहरूको अधिकतम संख्या हुनुपर्दछ, र यसले कीवर्ड स्टफिंगबाट बच्न मद्दत गर्दछ। यसका अतिरिक्त, तपाईं भिडियो र छविहरूबाट उपयोगी डाटा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। सही प्रकारको स्क्र्यापि tools उपकरणहरूको साथ , तपाईं सजिलैसँग तस्वीरहरू र भिडियो क्लिपबाट जानकारी निकाल्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको रैंकिंगलाई केही हदसम्म बढाउन सक्नुहुन्छ। संक्षिप्तमा, वेब स्क्र्यापिंग र एसईओ ले तपाईंको प्रतिस्पर्धी कसरी खोजी ईन्जिन परिणामहरूको शीर्षमा पुग्दैछ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।